Soloy Thutar sy Xfdesktop amin'i Nautilus ao amin'ny Xfce | Avy amin'ny Linux
Soloy Thutar sy Xfdesktop amin'i Nautilus ao Xfce
Thunar is the Mpitantana rakitra amin'ny alàlan'ny default, izany Xfce, izay ho tsotra sy maivana, tsy manana safidy sasantsasany izay manana Nautilus y Dolphin ohatra.
Ny lahatsoratra manaraka dia manazava ny fomba fampiasana Nautilus for Tantano ny Desktop ary ny fampirimana na dia ampiasaintsika aza Xfce ary nalaiko tamin'ny a mandefasa amin'ny forum Ubuntu. Vao nanandrana ity fomba ity tamin'ny solosaina findain'ny namana iray izay mampiasa aho Xubuntu 10.04 fa tsy maintsy mitombina amin'ny fizarana hafa. Ataovy!!!
1 Fandefasana ny Desktop Xfce
2 Fametrahana Nautilus
3 Nautilus ho toy ny default mpitantana rakitra
4 Mitantana ny sary an-tsary miaraka amin'ny Nitrogen
5 Amboary ny lahatahiry ao Nautilus.
Fandefasana ny Desktop Xfce
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny hanafoanana ireo singa rehetra ao Xfdesktop, izany hoe, avy amin'ny latabatr'i Xfce. Ho an'ity dia mankany Menu »Préférences» Desktop. Rehefa tonga any izahay dia manaraka ireto dingana manaraka ireto:
<° - Ao amin'ny tab lafika (Background) tsy mandeha izahay ny rindrina. Ho azy ireo dia manova ireto safidy manaraka ireto izahay:
Imagen: tsy misy
Loko: Loko marevaka ary mifidy ny mainty.
<° - Ao amin'ny tab karazan-tsakafo tsy mandeha izahay ny safidy rehetra miseho eo.
<° - Ao amin'ny tab sary Masina tsy mandeha izahay ny sary masina ao amin'ny safidy fijery.
Aorian'izay dia tsy maintsy mametraka isika Nautilus. Mba hanandramana hametraka farafahakeliny faran'izay miankina azo atao amin'ny Ubuntu / Debian dia manokatra terminal izahay ary mametraka:
Nanomboka izahay taorian'izay Nautilus amin'ny [Alt] + [F2] manoratra araka ny lojika: Nautilus tsy misy ny teny nalaina.
Nautilus ho toy ny default mpitantana rakitra
Ankehitriny mba hanao inona Nautilus azafady manomboha manaraka mahita anay hanatevin-daharana ny fotoam-pivoriana ary manolo Thunar y Xfdesktop mila mankany isika Menu »Préférences» Session and Start ary mankany amin'ny kiheba izahay FIVORIANA. Ao no tsy maintsy avelantsika fotsiny izay mila atombotsika rehefa miditra Xfce.
Raha ny mahazatra dia tsy maintsy avela ireto dingana manaraka ireto:
Raha misy zavatra hafa misokatra, dia akatonay izany ary avy eo tahirizo miaraka amin'ny bokotra: Vonjeo ny fivoriana.
Ampy izany amin'ny fotoana hanombohantsika, Nautilus tantano ny birao anay ary iza no manokatra ny lahatahiry. Ankehitriny, misy zavatra fanampiny roa tokony hatao, ny iray tonga ao amin'ny tutorial tany am-boalohany ary ny iray izay nampiana avy eo.
Mitantana ny sary an-tsary miaraka amin'ny Nitrogen
Raha manandrana manova ny temotra isika amin'ny alàlan'ny safidy Ovao ny sehatr'ilay Desktop amin'ny Tsindrio havanana tsy hisy hitranga. Izany dia satria miantso io safidy io gnome-fisehoana-toetra izay tafiditra ao anaty fonosana gnome-control-center.
Azontsika atao ny mametraka ity fonosana ity, saingy mila fiankinan-doha maromaro izany GNOME izay tsy ilaintsika, ka hampiasaintsika azota programa tena tsotra ho an'ny Tantano ny sary an-tsary en GNOME. Noho izany dia apetrakay ary ampiasainay amin'ity baiko ity:
Raha vantany vao natomboka ny fampiharana dia tsy maintsy hasiantsika configur izay fampirimana ireo sary izay tadiavintsika.
Mazava ho azy fa afaka mampiasa:
/ usr / mizara / fiaviana
Napetraka azota tsotra be izy io, ka heveriko fa tsy mila manazava ny fomba fampidirana na fanesorana lahatahiry misy sary aho. Hatao inona azota alefa rehefa manandrana manova ny rindrina izahay, tsy maintsy mamorona ho faka isika fisie ao anaty / usr / bin miaraka amin'ny anarana: gnome-fisehoana-toetra izay tokony hanana an'io ao anatiny:
[kaody] dir = »ltr»> asa –show-pejy = background
Omeo alalana hamono izy avy eo:
Ary vonona. Isaky ny manindry isika Ovao ny sehatr'ilay Desktop hivoaka izy io azota ????
Amboary ny lahatahiry ao Nautilus.
Ao amin'ny Xubuntu Manaraka sakafo manana ny plugin izahay TOERAM izay manatanteraka Thunar fa tsy Nautilus. Tsy afaka namantatra avy hatrany ny fomba fanovana an'io aho, ka ny nanjo ahy dia ny nametraka ilay Fampirimana manokana ao amin'ny desk.
Raha te hampandeha mora ny lahatahiry dia tsy maintsy apetraka gconf-tonian-dahatsoratra.
Avy eo miaraka amin'ny [Alt] + [F2] manatanteraka azy amin'ny alàlan'ny fanoratana «gconf-tonian-dahatsoratra»Tsy misy naoty naoty. Dia hanao izany isika fampiharana »nautilus» birao ary mampihetsika ny fampirimana manokana.
Vonona, manidy ny fivoriana isika, miditra indray ary Voilá !!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Soloy Thutar sy Xfdesktop amin'i Nautilus ao Xfce
eltbo dia hoy izy:
Torolàlana tsara ho an'ny olona tsy faly amin'i Thunar ao amin'ny Xfce ,,,, fa ny ahy kosa, tsy manova an'i Thunar ho zava-poana aho. Izay ilaiko ihany 🙂
Valio amin'i eltbo
Tiako koa i Thunar, mampalahelo fa tsy manana kiheba izy io na azo zaraina ho takelaka TT
donmatas dia hoy izy:
Ie! mahatsiravina fa tsy manana volomaso aho. Misy olona manitsy an'izany ve?
Mamaly an'i donmatas
ny zavatra tiako amin'ny nautilus dia ny fikarohana tafiditra, izay tsy ananan'i thunar
Tsy mety aminao ve izany? : https://blog.desdelinux.net/creando-un-buscador-de-ficheros-para-thunar-con-zenity/
Misaotra anao Elav nanohy nanankarena anay rehetra izay tia ny birao Xfce amin'ny fahalalanao. Heveriko fa mitovy amin'i eltbo, izay nilaza tetsy ambony: tsy manova na inona na inona Thunar aho. Hitako fa mandeha tsara lavitra noho i Nautilus (ho ahy) izy io ary mamela ahy hanokatra lahatahiry amin'ny maody console. Hanampy ny fizarana fizarana amin'ny F3 fotsiny aho toa an'i Nautilus, izany no hany zavatra angatahiko hataon'i Thunar.
Mpankafy thunar koa aho, ary ampiasaiko amin'ny xfce 4.6.2, satria ny distro mbola tsy manana 4.8. Zavatra roa fotsiny no tadiaviko: omen'i thunar ahy ny mombamomba ny habaka fonenan'ny rakitra 4 na 5 izay nofidiko tamin'ny totozy (ny ahy fotsiny no manipy ahy izay mipetraka ao amin'ilay lahatahiry manontolo), ary misy safidy maro hafa ahazoana alalana rakitra (toy ny "sokafy ity fampirimana ity ho faka" toy ny manana pcmanfm. Eny, raha misy mahalala dia lazao amiko.
Fa ao Thunar dia azonao atao ny manampy hetsika am-pahamendrehana hanaovana ny zavatra rehetra.
Tsy maintsy mankany amin'ny hetsika Edit / Custom / Add ianao, ary fenoy eto ireto:
Anarana: sokafy ho toy ny faka
Famaritana: sokafy ny lahatahiry ao Thunar miaraka amina tombony faka
Baiko: gksu thunar% d
Fomba fisehoan'ny fisehoana:
- Lamin'ny rakitra: *
- Miseho raha toa ka misy ny fisafidianana: Safidio fotsiny.
Tsy fantatro raha misy faritra azo ampiarahina ao amin'ny forum na amin'ny toerana hafa hamoahana ireo fikirakira ireo, satria manana hetsika fanao marobe izay nangoniko avy amin'ny toerana samihafa aho, hanovana ny haben'ny sary, jereo ny haben'ny kapila an'ireo rakitra voafantina maromaro, Sns
Toa mahaliana tokoa ity !!! Handramako izany. Tsy te hampiasa an'i Nautilus aho ho solon'ny Thunar noho ny faharatsian'ny fampisehoana, saingy angamba nametraka ireo fiankinan-doha Gnome fanampiny aho. Hanandrana an'i Nitrogen aho hahitako ny fandehany.
Tsy nety tamiko ilay izy 🙁
Midika izany fa niasa antsasaky ny fiasa izy io. Tsy azoko natao ny nampiseho an'i Nitrogen tamin'ilay script. Tsy haiko raha misy lesoka ao.
Ny zavatra iray hafa dia ny hoe Thunar dia mbola mpitantana fisie default. Nanova azy io aho tao amin'ny fizarana fampiharana fa tsy ampiasa azy akory.
Tsy misy, hanafoanana ny fanovana 🙁
Ao amin'ny Fedora 16, tsotra ny fanaovana an'i Nautilus ho Mpikirakira rakitra:
Fampiharana Menu> Fikirana> Fampiharana tiana kokoa> ao amin'ny kiheba Utilities dia apetrakao ao anaty File Manager ny nautilus.
Amin'izany dia tsy mila disable ny background desktop na zavatra hafa.
Saingy ny olana hitako ary azo antoka fa ho voavaha raha fantatro izay fiankinan-doha hametrahana, dia:
* Jereo ny sary kely an'ny PDF sy sary, fa tsy an'ny horonan-tsary.
* Tsy mbola nifantoka tamin'ny fametrahana Samba aho, fa ao Thunar ny fizarana lahatahiry iray tsy azo atao.
Amin'ny debian dia misy fonosana antsoina hoe 'tumbler' izay mikarakara ny famoronana ny fomba fijery, tsy haiko raha toa ka miasa ho an'ny fisie ihany koa:
Raha ny ahy dia mila kiheba aho rehefa hiasa amin'ny lahatahiry roa na maromaro miaraka amin'izay, na indraindray mila manana rohy fisie ao anaty boaty sns.
Namorona safidy manokana any Thunar aho, dia ny manokatra lahatahiry miaraka amin'i Nautilus, mampiasa ny baiko nautilus –no-desktop% d
Ny zavatra –no-desktop mba tsy hanokatra ny fizotrany izay tantanan'i Nautilus amin'ny alàlan'ny biraony Gnome. Raha toa ka mifanaraka amin'ny olona ilay hevitra.
Zernad dia hoy izy:
Salama manao ahoana ianao, nanandrana aho ary saika efa vitako ny zava-drehetra fa manome ahy olana amin'ny script ampiasainao amin'ny rindrina ity, ny olana dia izao manaraka izao:
[mpampiasa @ fampidinana Host] $ ./gnome-appearance-properties
./gnome-appearance-properties: andalana 1: gt: baiko tsy hita
./gnome-appearance-properties: andalana 6 :: baiko tsy hita
Toa tsy manana ilay rakitra na programa "gt" aho izay mahatonga ny andalana 6 dia manome ahy hadisoana koa, fantatrao ve izay mety ho ??
Amin'ny alàlan'ny fampiasako ny ArchLinux
Valiny tamin'i Zernad
Teniazo dia hoy izy:
Maninona aho no tsy afaka misintona varavarankely intsony amin'ny sisiny ankavanana ary manamboatra azy io hanova ny faritra iasana? Zavatra Xfce heveriko fa.
Valiny tamin'i Teniazo
Izy io dia toa ny fomba fiasany, mitranga amiko koa io
Hanavao ny tutorial, satria noho ny fironana mampalahelo (sasany) hanaisotra ny fampiasa amin'ny programa GNU mahazatra indrindra, dia tsy azo atao ny manaraka ny torolàlana satria nofoanana ny safidin'ny menio mifanaraka amin'izany.
Heveriko ihany koa fa ny "tutorial" -nanao amin'ny ankapobeny dia tokony ho somary be pitsiny kokoa, hisorohana ny fironana "güindosera" manome ny fomba fahandro mahazatra nefa tsy manazava na inona na inona, farafaharatsiny kely na antonony lalina. Saingy, rehefa mandeha ny «Basque», angamba ny fahombiazan'ny bilaoginao dia miankina amin'izany ...
Fonosana RPM. Fizarana 4: Packaging Not Tetris 2
Atombohy i Conky miaraka amin'ny rafitra ao amin'ny Gnome 3